”Roberto Gagliardini diyaar buu u yahay inuu berri safto waana laacib muhim ah” – Pioli – Gool FM
”Roberto Gagliardini diyaar buu u yahay inuu berri safto waana laacib muhim ah” – Pioli
(Milano) 13 Jan 2017 – Macallinka Inter Milan ee Stefano Pioli ayaa sheegay in Roberto Gagliardini uu “diyaar u yahay” kulanka Sabtiga berri ay Chievo ku wajahayaan isagoo dhanka kale sheegay in uu joogayo Gabriel Barbosa.
Macallinka oo ka hadlayay shirkii jaraa’id ee maanta ayaa sheegay in uu Gary Medel u arko daafac ee uusan u arkin khad dhexe, wuxuuna kooxdiisa uga digey inay Chievo doonayso inay kasoo kabato guuldarradii cuslayd ee todobaadkii hore ka gaartey Atalanta.
“Gagliardini? Waa saxiix muhim ah, wuxuu nagu kordhin doonaa xajmi iyo xiise waana u diyaar inuu dheelo,” ayuu Pioli ku bilaabay.
“Wuxuu isu qeexay si wanaagsan, isagoo hoosta ka xarriiqay inuu leeyahay dareen wayn oo dhanka boos qaadashada ah, wuxuuna dheeli karaa khad dhexe oo 2 ama 3 laacib ka kooban, waana laacib ku fiican kubad raacashada.” ayuu raaciyay Pioli oo dhanka kale amaanay hab-dhaqanka laacibiinta oo uu ku jira Gabigol oo uu sheegay inuu joogayo.
MILANO VS TORINO 6-0: Kooxaha reer Milano oo 6 jeer oo ay fasalkan la ciyaareen reer Torino ka wada adkaaday!